Apho ukusebenzisa iindawo zeplastiki
Ixesha Post: 10-16-2020
Iiplastiki zenziwe ngokubumba kunye nezinye iindlela zokulungisa, apho ubukhulu kunye nomsebenzi uhlangabezana neemfuno zabaqulunqi. Ngaphezu kwe-80% yamalungu eplastiki abunjwe ngenaliti yokubumba, eyona ndlela iphambili yokufumana iindawo zeplastiki ezichanekileyo. Tofa ...Funda ngokugqithisileyo »
Iindidi ezili-10 zentlaka yeplastiki kunye nokusetyenziswa
Ukwenza kakuhle kuyilo nakwimveliso yeplastiki, kufuneka siziqonde iindidi kunye nokusetyenziswa kweplastiki. Iplastiki luhlobo lwekhompawundi ephezulu yemolekyuli (ii-macrolecule) ezifakwa ipolymerized ngokudibanisa i-polymerization okanye i-polycondensation reaction nge-monomer njengezinto ezingavuthiyo. Zininzi izihlobo ...Funda ngokugqithisileyo »
Yintoni ibhokisi yezonyango
Ixesha Post: 10-15-2020
Ibhokisi yeplastiki yonyango (ekwabizwa ngokuba yibhokisi yamayeza) okanye iibhokisi zeplastiki zonyango, zisetyenziswa kakhulu kwizibhedlele nakwiintsapho. Ingasetyenziselwa ukugcina iziyobisi, izixhobo zonyango okanye ukuziphatha xa ubona izigulana. Ibhokisi yezonyango, njengoko igama layo lisitsho, sisiqulatho sokugcina ...Funda ngokugqithisileyo »
Ngokuphuhliswa kweshishini langoku, zininzi izinto ezibonakalayo zeplastiki. Kwangelo xesha, iimveliso zeplastiki zikwasetyenziswa ngokubanzi kwimizi mveliso eyahlukeneyo. Ngokukodwa, iinxalenye zeplastiki zichanekile ngakumbi. Ngoku masabelana nawe ngeengcebiso malunga neeplastiki ezichanekileyo ...Funda ngokugqithisileyo »
Uyikhetha njani inaliti yakho yokubumba umenzi
Inaliti nokuvunda na uhlobo isixhobo ekwenzeni zeplastiki okanye iintsimbi. Ubume ngenaliti ngumngundo ngqo kwaye intsonkothile, kwaye kufuneka ubomi inkonzo eliphezulu amakhulu amawaka imijikelo inaliti. Luhlobo lwezixhobo zexabiso eliphezulu, kwaye umgangatho wayo udlala ...Funda ngokugqithisileyo »